အသေဖက်တွယ်တဲ့ မေသက်နွယ်(ဖောင်းဒိုင်း) – Grab Love Story
“နွယ်….. ဒီနေ့ ည အတွင်းခံတွေ မဝတ်ခဲ့နဲ့နော် မောင်ဒီတိုင်းလေးမြင်ခြင်လို့” “ဟာ…. မောင်ကလဲကွာ နွယ်ဒီတိုင်းကြီးမနေရဲပါဘူး” “လုပ်ပါကွာ မောင့်မိန်းမက ဘယ်လောက်လှလဲဆိုတာ လူတွေကြည့်ရအောင်” “မောင် အရမ်းမကဲနဲ့ကွာ ဟိုဘက်ဝိုင်းကလူတွေက နွယ့်ကိုကြည့်နေကြပြီး” “ကြည့်ပစေပေါ့ကွာ မောင့်မိန်းမကို လှလို့ကြည့်တာပဲဟာ” “သူတို့က နွယ့်အောက်ပိုင်းကိုကြည့်တာကွ မောင်လက်ခဏဖယ်ဦး” ထိုခါမှ ရဲရင့်ဦးလဲ မေသက်နွယ် စောက်စီလေးကို ပွတ်ကာပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကတော့ ရဲရင့်ဦးလက်မောင်းလေးကိုကိုင်ကာ ခေါင်းကိုငုံ့ထားသည်။ မေသက်နွယ်လဲ စောက်စိကို ပွတ်ပေးနေခြင်းကြောင့် သတိလွတ်ကာ ပေါင်ကိုကားပေးမိလိုက်သည်။ စားပွဲထိုးလေး စားသောက်စရာတွေလာချမှ ရဲရင့်ဦးလည်း ဖယ်ပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မျက်နာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ ရမက်စိတ်များနှင့် မျက်နာလေးပါရဲနေတော့သည်။ ရဲရင့်ဦးနဲ့မေသက်နွယ်လဲ စားသောက်စရာရှိတျိားကို စားသောက်လိုက်ကြသည်။ ရဲရင့်ဦးက မေသက်နွယ်ကို အချိုရည်ထဲတွင် အရက်ထည့်ကာ တိုက်လိုက်သည်။
“သက်နွယ် မောင်တို့ဒီည ဒီနားကဟိုတယ်မှာပဲ အိပ့်ကြမယ်လေ ဘယ်လိုလဲ” “မောင့်သဘောလေ သက်နွယ်ကတော့ဘယ်မှာအိပ့်အိပ့် ဘယ်သူနဲ့အိပ့်အိပ့်ရတယ်” “လူဆိုးမလေးပါကွာ ကဲပါလာ အတာဆိုလဲ ဟိုတယ်သွားနားကြမယ်” ရဲရင့်ဦးနဲ့ မေသက်နွယ်လဲ ဟိုတယ် အခန်းတစ်ခန်းယူခဲ့လိုက်ကြသည်။ အခန်းထဲရောက်သည်နှင့် ရဲရင့်ဦးက မေသက်နွယ်နှုတ်ခမ်းများအား စနမ်းလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ ရဲင့်ဦးခါးကို ဖက်ကာ အနမ်းများပြန်ပေးလိုက်သည်။ ရဲရင့်ဦးကတော့ မေသက်နွယ်တင်သားများကို ကိုင်ကာချေရင်း နမ်းနေလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်က ခဏအကြာတွင် နမ်းတာကိုရပ်လိုက်ပြီး ရဲရင့်ဦးလီးကိုထုပ်ကာ ငုံစုပ်ပေးလိုက်သည်။ ရဲရင့်ဦးမှာတော့ ချက်ချင်းနတ်ပြည်သို့ ရောက်သွားသည်ဟု ထင်ရလောက်အောင် ကောင်းသွားသည်။ မေသက်နွယ်စုပ်ချက်များမှာလဲ အရင်ကထက်ပိုကျွမ်းကျင်လာခဲ့သည်။ “အား……… ကောင်းလိုက်တာကွာ……. တခြားသူတွေလဲ ဒီနှုတ်ခမ်းလေးကို စွဲနေမှာပဲနော်..” မေသက်နွယ်က လီးထိပ့်လေးကို နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် တေ့ကာ စုပ်ပေးလိုက်ချိန်တွင်တော့ ရရင့်ဦးမှာ ဘယ်လိုမှထိန်းမထားနိုင်ပဲ လရည်များထွက်ကာ ပြီးသွားခဲ့သည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ ရဲရင့်ဦးလီးမှ လရည်များကို အကုန်စုပ်ယူကာ မျိုချပြစ်လိုက်တော့သည်။ ရဲရင့်ဦးလဲ မေသက်နွယ်ကို ကုတင်ပေါ်တင်ကာ ဂါဝန်းလေးလှန်ပြီး ဖောက်ဖုတ်လေးကာ နမ်းပြစ်လိုက်သည်။ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ မနေ့ညက ကျော်ကျော်ထွန်းလိုးထားသောကြောင့် ပြဲလှန်ကာနေသည်။
မေသက်နွယ်၏ကာမရမက်ကောင့် စောက်စီလေးမှာ တောင်ထနေသည်။ ရဲရင့်ဦးလည်း မေသက်နွယ်စောက်စိလေးအား ဦးစားပေးကာ စုပ်နမ်းပေးလိုက်သည်။ ရဲရင့်ဦးရဲ့စုပ်ချက်များကြောင့် မေသက်နွယ်တစ်ယောက် အိပ့်ယာခင်းများအား စုပ်ကိုင်ကာ ကော့ပျံနေသည်။ ရဲရင့်ဦးလည်း ဆက်မနမ်းတော့ပဲ မေသပ်နွယ်ဘေးတွင် ဝင်အိပ့်ကာ စောက်ဖုတ်လေးအား လက်ဖြင့် ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ “သက်နွယ်…… လီးကြီးကြီးနဲ့ ခံခဲ့တဲ့အကြောင်း မောင့်ကို ပြောပြပါလားဟင်” “မောင်ကတကယ်သိချင်တာလား သိချင်ရင်ပြောပြမှာပေါ့ကွ” ရဲရင့်ဦးက မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့် ဖြေးဖြေးချင်းလေး လိုးနေလိုက်သည်။ “နွယ်နဲ့သူက ကျောင်းထဲမှာတွေ့တာ သူကလဲနွယ့်လိုပဲ ကျောင်းဆရာလေ နွယ်နဲ့မောင် လက်ထပ်ပြီးမှ သူကပြောင်းလာတာ နွယ့်ကိုသူက အိမ်ထောင်ဘယ်မှန်မသိဘူး ထိကပါးရိကပါးလုပ်တာသိလား ကျန်တဲ့ဆရာတွေက ပြောတော့မှ နွယ်အိမ်ထောင်ဘယ်မှန်းသိသွားတာ” “နွယ်နဲ့သူနဲ့က ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲကွ” “သူကနွယ့်ကို ဖေ့ဘွတ်ကနေစပြီး စကားပြောတာ နွယ်လဲသူနဲ့အသိုက်သင့်ပြောပေးရင်းနဲ့ သူကိုကြွေသွားတာ မောင်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော် နွယ်ကသူကိုသဘောကြတာ ” “အပြောကောင်းတယ်ကွာ မောင့်မိန်းမကတော့ ဆက်ပြောပြပါဦးကွ ”
“သူနာမည်က ဝေယံတဲ့ သူနွယ့်ကို အအေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာချိန်းတာ အအေးသောက်ရင်းနဲလဲလေ နွယ်ရဲ့နို့တွေကို ကြည့်လိုက်တာမှ မျက်လုံးကျွတ်ကျမတတ်ပဲ နွယ်ကလဲ အဲ့နေ့ကသေချာ လည်ပင်းအဟိုက်ရွေးဝတ်သွားတာလေ ဟိဟိ” “လုပ်ပြီကွာ အကြံကြီးနဲ့ပေါ့” “ကြံမှာပေါ့ မောင်ကမှဝအောင်မကျွေးတာ” “ဟုတ်ပါပြီဗျာ ဆက်ပြောပါဦး” “သူကလိုးရင်း နုနုညံညံ မလိုးတတ်ဘူးတဲ့ နွယ်လဲသူနဲ့တွေ့ပြီးထဲက ကြမ်းကြမ်းလိုးတာကို ပိုကြိုက်သွားတာသိလား” “သူနဲ့အတူတူ ကျောင်းနားက တည်းခိုခန်းကိုသွားတာ အဲ့မှာ နွယ့်တပည့်ကောင်လေးနဲ့တွေ့တာပဲ ဟို…… မောင်တွေ့တဲ့ ဗီဒရို ထဲက ကောင်လေးလေ” “အခန်းထဲလည်းရောက်ရော ကိုဝေယံက နွယ့်လက်နှစ်ဖက်ကို စုကိုင်ပြီးတော့ အပေါ်မြှောက်ပြစ်လိုက်တာသိလား ပြီးတော့မှနှုတ်ခမ်းတွေကိုလာနမ်းတာ သူရဲ့အနမ်းတွေက တအားကြမ်းတာပဲသိလား နွယ့်နှုတခမ်းလေးကို ထော်နေအောင်နမ်းတာ လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းချုပ်ထားတော့ နွယ်မှာလေ သူ့ကိုလည်းဖက်လို့မရ သေချာလည်းပြနမ်းလို့မရနဲ့ ရွစိရွစိဖြစ်လာပြီး စိတ်တွေလဲ အရမ်းလှုပ်ရှားတာပဲ ပြီးတော့မှ သူကမေးတယ်သိလား “ခပ်ကြမ်းကြမ်းကြမ်းချစ်ချင်တယ် ရမလား”တဲ့ နွယ်လဲအတွေ့ကြုံသစ်မို့ ရတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် ”
“မောင်သိလား ဘယ်တုန်းထဲကဆောင်ထားလဲမသိဘူး သူကျောင်းလွယ်အိပ့်ထဲမှာ ကြိုးတွေပါလာတယ် အဲ့ကြိုးတွေနဲ့ နွယ့်လက်တစ်ဖက်စီကိုတုတ်ပြီး ကုတင်တိုင်တိပ့်တစ်ဖက်စီကို တုတ်ချီလိုက်တာ ခြေထောက်တွေလဲ အဲ့တိုင်းချည်လိုက်တော့ နွယ်မှာ ကားယားပြီးဖြစ်နေတာ ပြီးတော့မှသူက နွယ်စောက်ဖုတ်လေးကို နမ်းတာ နွယ့်မှာကော့ပျံနေတာပဲ သူကစောက်ဖုတ်လေးကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ဖိဖိပြီးစုပ်ယူတာ နွယ်မှာ တစ်ကိုယ်လုံးကို လူးလိမ့်နေတာပဲ လက်တွေခြေထောက်တွေလဲ ကြိုးနဲ့ချီထားတော့ နွယ့်မှာရမက်တွေပိုလာပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ထဲက အရေတွေက တစ်စက်စက်နဲ့ကိုစီကျနေတာ သူကလဲလေ နွယ်စောက်ဖုတ်ထဲက ထွက်တဲ့အရေတွေကို အကုန်သောက်ပြစ်တာသိလား ပြီးတော့မှ သူ့လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးပြီးမွှေတာ ဂျီစပေါ နေရာကို တန်းနေအောင်ထိတယ်သိလား နောက်တော့သူက အားမရနိုင်ပဲ လက်သုံးချောင်းလုံးကို ထိုးထည့်တာ နွယ့်စောက်ဖုတ်လေးထဲမှာ ပြည့်သိပ့်သွားတာပဲသိလား” “ထိုချိန်တွင် ရဲရင့်ဦးကလဲ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးထဲအား လက်သုံးချောင်းထည့်ကာ မွှေပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်က ပေါင်ကိုကားကာ ဝင်သထက်ဝင်အောင် ကော့ကော့ပေးရင်း ဆက်ပြောနေသည်။ “ပြီးတော့မှ ခြေထောက်က ကြိုးနှစ်ချောင်းကို ဖြုတ်ပေးပြီး နွယ့်ပေါင်းကြားမှာ နေရာယူလိုက်တာသိလား နွယ်လဲ သူလီးဘယ်လောက်ရှိမလဲလို့ ကြည့်လိုက်တာ နွယ်တောင်လန့်သွားတယ်သိလား သူလီးကြီးကလေ နွယ်လက်တစ်စုပ်စာလောက်တောင်မကဘူး နွယ်ဆိုသူ့လီးကြီးကိုစုပ်ပေးရင် ဒစ်ထိပ့်လေးပဲစုပ်ပေးလို့ရတာ အဲ့လီးကြီးနဲ့လေ နွယ့်စောက်စိလေးကို ပွတ်ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းခြင်းလေးလိုးတာ ဒါပေမဲ့လေနွယ်မှာအော်လိုက်ရတာ ပါကင်ဖောက်ခံရတဲ့အတိုင်းပဲသိလား”
“အော်……. အတာကြောင့် မောင့်မိန်းမစောက်ဖုတ်ပြဲလာတာပေါ့ ဘယ်လောက်ထိပြဲလည်းမသိဘူး စမ်းကြည့်ဦးမှ ” “မောင်ရယ် မောင်လက်လေးချောင်းလောက်တော့ အေးဆေးပဲသိလား” “တကယ်” ရဲရင့်ဦးလဲ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လက်လေးချောင်းလုံးထည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ဟုတ်သည် မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ လက်လေးချောင်းလုံးဝင်တာပင် ဘယ်လိုမှမနေခြေ။ “ဆက်ပြောပါဦးကွ” ” သူ့လီးကြီးနဲ့လိုးလိုက်တော့ ဖောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးကို ပူးထူးသွားတာပဲသိလား သူ့လီးကြီးကလဲ တစ်စို့ကြီးလေ သူကတော့ခဏလေးညာင့်ပြီး လိုးပေးတာ နွယ်လဲနောက်ပိုင်းကျ စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးယားလာပြီး ကောင်းလာရော အဲ့တော့မှသူက ပြစ်ပြစ်ပြီးဆောင့်လိုးတာသိလား နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာတော့ ပူးထူးနေတာပဲ” ရဲရင့်ဦးလည်း ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ပဲ မေသက်နွယ်ပေါင်ကြားဝင်ကာ စောက်ဖုတ်လေးကို လိုးလိုက်တော့သည်။ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ စောက်ရည်များနှင့်မို့ ရဲရင့်ဦးလီးတစ်ချောင်းလုံး အထစ်ငေါ့မရှိ ဝင်သွားသည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ ရဲရင့်ဦး လိုးကောင်းစေရန် အစွမ်းကုန်ဖြဲကားပေးထားလိုက်သည်။ “နွယ် သူကနွယ်စောက်ဖုတ်ကို ဘယ်လိုလိုးသေးလဲဟင်” “လိုးတာပေါမောင်ရဲ့ ကိုသူပေါ်ကတတ်ဆောင့်ခိုင်းပြီး နွယ်အိုးနှစ်လုံးကို တစ်ဖုန်းဖန်းမြည်အောင်ရိုက်လိုးတာသိလား ပြီးတော့လေ နွယ်မအော်နိုင်အောင် နွယ့်ပါစပ်ထဲကို နွယ့်ပင်တီလေးလုံးပြီးထည့်ပေးထားတာ နွယ်ဆိုလေ မျက်ရည်တွေထွက်ကျလောက်အောင်ထိကောင်းတာ သူကဖင်ကိုရိုက်လေ နွယ်စောက်ဖုတ်ထဲမှာယားပြီး ကောင်းလေပဲသိလား ပြီးတော့လေ နွယ့်နို့နှစ်လုံးကို သူကြိုးတွေနဲ့ချည်ပြီး ဘရာလိုးဝတ်ပေးထားတာ နွယ်နို့တွေမှာလေ တုန်ခါနေတာပဲသိလား” ရဲရင့်ဦးဆောင့်ချက်များမှာလဲ အရင်ကထက်ပိုကာ မြန်လာသည်။ မေသက်နွယ်တစ်ယောက်လဲ ပြောရင်းဖြင့် ဘယ်လိုမှမနေနိုင်ပဲ နို့တွေကိုကိုင်ကာ ပွတ်ချေနေသည်။
“နောက်ပြီးလေ နွယ့်ကိုရေချိုးခန်းထဲခေါ်ပြီး ရေပန်းနဲ့နွယ်လက်ကို ကျိုးချည်ပြီးနောက်ကလိုးတာဆိုလေ နွယ်မှာ ပေါ့နေအောင်ခံရတာ သူကနောက်ကအားပါပါစောင့်လိုးရင်းနဲလဲ နွယ့်နို့သီခေါင်းလေးတွေကို ချေပြီး ဆွဲလိုးတာ နွယ်အရမ်းကြိုက်တာပဲသိလား… ပြီးတော့လေ နွယ်ဖင်ထဲကို ဖန်နဲ့လုပ်ထားပြီး ထိပ့်က အလုံးပါတဲ့ဖင်ပေါက်ချဲတဲ့ဟာ တပ်ပေးပြီး စောက်စီကို နောက်ကနေပွတ်ပြီးလိုးတာ နွယ်ဆိုအဲ့နေရာမှတင် ခွေကျသွားတာပဲ” “အား……… အား………… ကောင်းလိုက်တာကွာ မောင့်မိန်းမကို သူကဘယ်ကိုလိုးတေးလဲဟင်” “လိုးတာပေါ့မောင်ရဲ့ နွယ်ခွေကျနေတာကို ပြန်ထူပြီးတော့ နွယ်င့်္်ကို လိုးတာ နွယ်ဆိုမျက်ဖြူတွေပါ ဆိုက်သွားတာပဲသိလား” “အား… အား…. ပြွတ် …. ပြွတ်…. အား… အား….” “အား…. မောင် ဆောင့် ဆောင့် နွယ်လဲ ပြီးတော့မယ်…. အား…..” ရဲရင့်ဦးလဲ မေသက်နွယ် ပြန်ပြောပြတာကို နားထောင်ရင်း ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးချလိုက်တာ မေသက်နွယ်နှင့် ပြိုင်တူပြီးသွားသည်။ မေသက်နွယ်မှာ ရမက်တွေထန်နေဆဲမို့ ရဲရင့်ဦး၏ ပြီးသွားသောလီးကို စောက်ဖုတ်တွင်းမှ ညှစ်ကာယူနေသည်။ မေသက်နွယ်နှင့် ရဲရင့်ဦးလည်း ဖက်ကာ မှိန်းနေလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်က ရဲရင့်ဦးနဖူးပေါ်တွင် ရှိသောချွေးလေးများကို သုပ်ပေးလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းလိုက်သည်။
ထိုနောက်မေသက်နွယ်က လှပသောအပြုံလေးနှင့် “မောင်…… ဘယ်လိုလဲ ကပ်ကိုးး အရသာသစ်တစ်မျိုးလေး ခံစားချင်သေးလား” “မောင့်ကို ဘယ်လိုခံစားစေချင်လို့လဲကွ မိန်းမမှာ အကြံရှိလား” “ရှိတာပေါ့မောင်ရဲ့ မောင့်အတွက်ရော နွယ့်အတွက်ပါ ကောင်းတဲ့အကြံလေ” “မောင်မိန်းမကတော့ကွာ တခြားလီးကို ဆာနေပြန်ပြီလားကွ ” “ဒါပေါ့ မောင့်လီးကသေးသေးလေးလေ နွယ်ကလီးကြီးမှ ခံလို့အားရတာသိဘူးလား” “မိန်းမကတော့ကွာ” ရဲရင့်ဦးက မေသက်နွယ် နဖူးလေးကို လက်သီးလေးနှင်ထုကာ ရယ်လိုက်သည်။ “ဟုတ်ပါပြီကွာ လီးကြီးကြီးနဲ့ မောင့်မိန်းမစောက်ပတ်ပြဲသွားအောင် လိုးလွတ်လိုက်ကာစေဗျာ” “ဟိ… အလိုပြောတော့ရော နွယ်ကကြောက်မယ်ထင်လား” “ဟား…… ဟား…….” နှစ်ယောက်သားရယ်ရင်း မေသက်နွယ်က ရဲရင့်ဦးရင်ခွင်ထဲကို တိုးဝင်လိုက်သည်။မေသက်နွယ်နှင့် ရဲရင့်ဦးလည်း ခဏအမောဖြေလိုက်ကြသည်။ “မောင်…. ထတော့လေကွာ ကလပ်ကိုသွားပြီး နွယ်တို့အတွက်လူရှာရအောင်” “နေပါဦးနွယ်ရဲ့ ရေလေးတော့ ချိုးခဲ့ရအောင်လေကွာ တော်ကြာမောင့်မိန်းမကို ဘယ်သူမှမလိုးချင်ပဲ နေဦးမယ်” “မောင်နော်…….. နွယ်ကိုလိုးချင်တဲ့သူမှ ပုံလို့ ဟွန့်” မေသက်နွယ်က ရဲရင့်ဦးအား နှုတ်ခမ်းလေးမဲ့ကာ ပြန်ပြောလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်နှင့် ရဲရင့်ဦးလည်း နှစ်ယောက်သားတူတူ ရေချိုးကာ ကလပ်သို့ ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။ ကလပ်သို့ရောက်ချိန်တွင် ရဲရင့်ဦးက ဘားတွင်နေခဲ့ပြီး မေသက်နွယ်ကတော့ ကြမ်းပြင်သို့ဆင်းကာ လူများကြားတွင် တိုးကာ ကနေသည်။
ရဲရင့်ဦးလည်း အရက်ကို ဖီး ခံပြီးသောက်ရင်း ကပွဲကိုကြည့်နေလိုက်သည်။ နာရီဝက်လောက်အကြာတွင် မေသက်နွယ်က လူနှစ်ယောက်ကိုဖက်ကာ ကပွဲမှ ထွက်လာခဲ့သည်။ မေသက်နွယ်က ရဲရင့်ဦးအား မျက်လုံးမှိတ်ပြပြီး အချက်ပေးထားခဲ့သည်။ ရဲရင့်ဦးလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသောကြောင့် သောက်လက်စအရက်ကို ကုန်အောင် သောက်နေခဲ့သည်။ ရဲရင့်ဦး ဘားမှ ထမည်အလုပ်တွင် ဖုန်းထဲသို့ မက်ဆေ့ ဝင်လာသည်။ “မောင်…… နွယ်တို့အတွက် လူနှစ်ယောက်ရှိတယ် နွယ်သူတို့ကို နွယ်တို့အခန်းကို ခေါ်သွားမယ် တံခါးကိုလော့ချမထားဘူး မောင်ဝင်လာခဲ့နော် အော်မောင်….. မောင်ဒီနေ့ည အတွင်းခံကို နွယ်ချွတ်မပေးမချင်း မချွတ်နဲ့နော်…. ချစ်တယ်မောင်” ရဲရင့်ဦးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး ဟိုတယ်အခန်းလေးသို့ ပြန်လာလိုက်သည်။ ဟိုတယ်အခန်းလေးမှာ ဝင်ပေါက်မှကြည့်လျှင် ကုတင်ကိုတန်းမမြင်ရသောကြောင့် အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်သည်နှင့် မေသက်နွယ်ရဲ့အသံလေးက အရင်ဦးဆုံးပျံ့လွန့်လာသည်။ “နှစ်ယောက်လဲ ဒီက ဂရုမစိုက်တတ်ဘူးနော် ရှင်တို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးရော ကျမကတော့အားလုံးဖြစ်တယ် ခ်ခ်” မေသက်နွယ်အသံလေးမှာ ကြာမှုသံလေးနှင့် တကယ်ကြေးစားပုံစံပေါက်နေသည်။ ရဲရင့်ဦးလဲ ကုတင်ရှိရာကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ မေသက်နွယ်က မက်တပ်ရပ်လျှက် နှစ်ယောက်စလုံး လီးကိုကိုင်ကာ ထုပေးနေသည်။ တစ်ယောက်တစ်ဖက် မေသက်နွယ်နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းနေကြသည်။ ရဲရင့်ဦးလည်း မေသက်နွယ်အကြိုက်နှင့် တူရဲ့လားဆိုပြီး ထိုနှစ်ယောက်လီးများကို လှမ်းကာကြည့်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံးလီးများမှာ လူကောင်များနှင့်အလိုက် လီးကြီးများမှာ ထွာလွန်းလှသည်။
အသားညိုသောသူများဖြစ်၍ လီးနှစ်ချောင်းလုံးမှာ မဲနက်နေသည်။ ကုလားဖြစ်ဟန်တူသော တစ်ယောက်၏ လီးတွင် အဖုထစ်များက လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ဝန်းရံနေသေးသည်။ ရဲရင့်ဦးတစ်ယောက်တော့ မေသက်နွယ်အစား လီးကြီးများကိုကြည့်ကာ ကြက်သီးများပင်ထနေသည်။ မေသက်နွယ်ကတော့ ခဏအကြာတွင် ထိုလူနှစ်ယောက်ရှေ့တွင် ထိုင်ချလိုက်ပြီး လီးနှစ်ချောင်းကို တလှည့်စီ စုပ်ပေးနေသည်။ “ကိုကျော်…….. ဆော်ကတော့မိုက်တယ်ဗျာ အစုပ်ကတော့တော်တော်ကျွမ်းတာပဲ” “အေးကွ ဒီလိုအလှပဂေးလေးကို တွေ့ရမယ်လို့ ထင်မထားဘူးကွာ အရင်နေ့တွေကချခဲ့တဲ့ ဖာသည်မတွေနဲ့တော့ အကွာကြီးကွာတယ် ကုလားရေ” ထိုလူနှစ်ယောက်မှာ မေသက်နွယ်အား ကြေးစား ဖာသည်မဟု ထင်နေကြသည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ ထိုလူနှစ်ယောက်ကို ဖက်သည်မထက်ပင်သာအောင် ပြုစုပေးနေသည်။ “ဟေ့ဆော်လေး……. ငါမင်းကိုလိုးချင်နေပြီ ငါ့ကို ကုန်းပေးဦး” မေသက်နွယ်အား အသားညိုညိုနှင့် ကျော်ကြီးဆိုသောလူက ရင့်ရင့်သီးသီးပင်ပြောလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ တခ်ခ်ရယ်ကာ ပေါင်တိုကိုယ်ကပ်အင်္ကျီးလေးအား တင်ပါးပေါ်ထိပင့်ကာ ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ထိုလူကလဲ မေသက်နွယ် ပင်တီလေးအား ချွတ်မနေတော့ပဲ ဘေးသို့တစ်ချက်ဖယ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ဆောင့်ကာ လိုးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာ ရှေ့က ဂေါ်လီတွေနှင့် လီးကြီးကို စုပ်နေသောကြောင့် မအော်နိုင်ပဲ တစ်ချက်တွန့်သွားသည်။
ထိုလူကလဲ ကျေနပ်သွားပုံနှင့် တွန့်သွားသော မေသက်နွယ်အိုကြီးအား တစ်ချက်ရိုက်ကာ လီးကြီးကို ထပ်မံဆောင့် ထိုးလိုက်သည်။ ဒီတစ်ခါတွင်တော့ မေသက်နွယ်အား ကြေစားဖာသည်မများကို လိုးပုံမျိုးနှင့် တစ်ချက်မှလျော့ပဲ ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုးသည်။ ရှေ့မှကုလားကလဲ မေသက်နွယ် ပါးစပ်ထဲသို့ လီးအဆုံးထိထိုးထည့်ကာ နောက်ကလူနှင့် အပေးယူညီစွာ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေသည်။ မေသက်နွယ်မှာတစ်ချက်မှမအော်နိုင်ပဲ မျက်ကည်များပင် ထွက်အောင် စုပ်ပေးပြီး စောက်ဖုတ်အား လိုးခံနေသည်။ ခဏအကြာတွင် မေသက်နွယ်ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်စားများကို ချွတ်ပြစ်လိုက်ပြီး လူလည်းလိုက်သည်။ ရဲရင့်ဦးမှာ မေသက်နွယ်မျက်နာပေါ်မှ ရမက်ခိုးဝေကာ ကာမအရသာခံစားနေပုံများကိုကြည့်ပြီး ဘောင်းဘီထဲမှလီးက အလိုလိုတောင်လာသည်။ လီးမှာ အတွင်းခံထဲတွင် တောင်ထကာ ဖောင်းကားနေသည်။ ရဲရင့်ဦးမှာ ချွတ်ကာထုလိုက်ချင်သော်လည်း မေသက်နွယ်မှာထားသောကြောင့် သည်တိုင်းပဲ ဆက်ကြည့်နေလိုက်သည်။ “ရှင်ကုတင်ပေါ်တတ်လိုက်လေ ကျမအစွမ်းကုန် ပြုစုပေးမယ် ရှင့်လီးကြီးက အရမ်းအားရတာပဲ” မေသက်နွယ်က ကိုကျော်ဆိုသောလူကို ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူက ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်ထားပြီး မေသက်နွယ်က ကုတင်ပေါ်တွင် ဒူးထောက်ကုန်းကာ စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုခါမှ ကုလားဆိုသောလူက ကုတင်အောက်မှနေပြီး မေသက်နွယ်နောက်တွင်နေရာယူကာ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးအား တစ်ချက်ချင်း အားပါပါနှင့် ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။
“အွန်း… အွန်း… အွန်း….. အွန်း….” ကုလားလီးတစ်ချက်ဝင်တိုင်း မေသက်နွယ်ညည်းသံလေးမှာ ရဲရင့်ဦး၏ ရမက်စိတ်တွေကို နိုးဆွနေသည်။ ရဲရင့်ဦးလည်း ဘောင်းဘီကို အောက်လျောလိုက်ပြီး အတွင်းခံပေါ်မှနေပြီး လီးကြီးကို ပွတ်နေသည်။ မေသက်နွယ်ကတော့ ဂေါ်လီလီးကြီးဒဏ်ကို အတော်ပင်ခံစားနေရသည်။ နောက်မှနေပြီး တစ်ချက်ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း မေသက်နွယ်မှာ လည်ချောင်းထဲမှ အသံက လျှံထွက်နေသည်။ “ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကာ စီးနေတာပဲ အိုးကြီးတွေကလဲ အရမ်းတောင့်တာပဲ ပြီးလို့ကတော့ ဖင်ပါးလိုးပြစ်မယ်” “ဖြန်း.. ဖြန်း… ဖြန်း…..” “အား…. အား…… အား…..” မေသက်နွယ်က လီးကြီးကိုပါစပ်ထဲမှထုတ်ကာ ညည်းလိုက်ချိန်တွင် ကုလားက ဖင်ကိုက်တာကိုရပ်လိုက်ပြီး မေသက်နွယ်လည်ပင်းအား လက်ဖြင့်စုပ်ကိုင်ကာ နောက်မှ ဆောင့်ကာလိုးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာတော့ မျက်နာတစ်ခုလုံးနီရဲကာ လည်ပင်းရိုးများပင် ထောင်လာသည်။ ကုလားက လည်ပင်းအားလွတ်ပေးလိုက်ချိန်တွင်တော့ မေသက်နွယ်မှာ ခေါင်းက ကုတင်ပေါ်သို့ ကျသွားသည်။ ထိုခါမှ ကုလားက မေသက်နွယ်ခါးအားကိုင်ကာ နောက်မှနေပြီး ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ “အား………. ကောင်းတယ်……. ဆောင့်ပေး……. စောက်ဖုတ်ပြဲအောင် ဆောင့်… လိုး…. ပေး…” “ဟား……. ဟား……. ကြိုက်သွားပြီး” ကုလားက ကုတင်ပေါ်သို့ ခြေထောက်တစ်ချောင်းတင်ကာ မေသက်နွယ်အိုးကြီးများကို ဖိကပ်ကာ ဆိုက်တိုက်လိုးပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကတော့ ကုတင်အိပ့်ယာခင်းများကိုစုပ်ကိုင်ကာ ဂေါ်လီလီးကြီးကပေးသော ကာမအရသာကို ခံစားနေသည်။ ရဲရင့်ဦးကတော့ လီးကြီးမှာ အရမ်းတောင်လွန်းနေပြီး မေသက်နွယ်၏ ရမက်ထန်ထန် အလိုးခံသံများကြောင့် ဘယ်လိုမှမနေနိုင်ပဲ လီးမှ ရှေ့ပြေးအရည်လေးများစိမ့်ကာ အတွင်ခံတွင် စိုလာသည်။ ရဲရင့်ဦးလဲ လီးကိုအတွင်ခံပေါ်မှပွတ်ကာ ကာမအရသာကို မေသက်နွယ်နှင့်အတူ ခံစားနေသည်။ ကုလားရဲ့လိုးချက်များက ဆက်တိုက်ဆိုသလိုမြန်လာပြီး မေသက်နွယ်အား အားကုန်ဆောင့်ရင်းလိုးနေသည်။
ခဏအကြာအကြာမှားပဲ အားပြင်းပြင်းနှင့်တစ်ချက်ဆောင့်ကာ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်ထဲကို လရည်များပန်းထည့်လိုက်သည်ကို ရဲရင့်ဦးတွေ့လိုက်ရသည်။ မေသက်နွယ်လဲ ခုမှအသက်ရှုချောင်သွားပုံနှင့် ဖင်ကိုထောင်ထားပြီး ခေါင်းကိုကုတင်နှင့်ကပ်ကာ အသက်ကို ဝအောင်ရှုနေသည်။ ထိုချိန်တွင် ကုတင်ပေါ်မှ ကျော်ကြီးဆိုတဲ့သူက မေသက်နွယ်အား ခေါ်ကာ နားနားတွင် ကပ်ကာပြောလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ ချက်ချင်ပဲ ကျော်ကြီးလီးကိုကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်လေးအား မထည့်ပဲ တစ်ချက်နှစ်ချက်ပွတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ ဖင်ဖြင့်တေ့ကာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ ကျော်ကြီးလီးမှာကြီးလွန်းသောကြောင့် မေသက်နွယ်ဖင်လေးထဲတွင် ပြည့်သိပ့်ကာဝင်သွားသည်။ မေသက်နွယ်မှာလဲ အသံရှည်ထွက်အောင်ထိပင် ညည်းနေသည်။ မေသက်နွယ်၏ ညည်းသံများက ရဲရင့်ဦးအတွက် ရမက်တွေကို ပိုထန်စေသည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ ပတမအစတွင်သာ ဖြေးဖြေးချင်းလိုးနေသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးကာ နို့နှစ်လုံးကိုလည်း မိမိဘာသာ ချေစုပ်နေသည်။ ကျော်ကြီးက မေသက်နွယ် စောက်စိလေးကို ပွတ်ကာပေးရင် ဖင်လိုးနေသည်။ “အား….. အား….. ကောင်းလိုက်တာ…. အလိုလီးကြီးတာမှကြိုက်တာ…” “ကြိုက်ရင်ဆောင့်စမ်းမြန်မြန် ပြီးရင်နင့်ကို နှစ်ယောက်ညှပ်လိုးမယ် ဖာသည်မ ကြားလား” “အား… အား……… စိတ်ကြိုက်လိုး….. ဒီလိုလီးကြီးတွေနဲ့ဆို မပျက်ခံပေးနေမှာ….အား…” မေသက်နွယ်ရဲ့ အသံကြားတော့ ရဲရင့်ဦးမှာ တကိုယ်လုံး ရှိန်းဖိန်းကာ ကာမစိတ်များ အဆက်မပျက်တတ်လာနေသည်။ အခန်းထဲမှ ကာမသားကောင်းများကလဲ လိုးဆော်သံများက အဆက်မပျက်ထွက်ကာနေသည်။ မေသက်နွယ် အိုးလေးအား ရိုက်ကာလိုးထားသောကြောင့် ရဲကာနေသည်။ မေသက်နွယ် က ကျော်ကြီးပေါ်သို့မှောက်ကာ နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းနေကြပြီး ညှောင့်ကာလိုးနေသည်။ မေသက်နွယ်ဖင်ထဲမှ တစ်စို့ကာ ဝင်ထွက်နေသည်။
မေသက်နွယ်ဖင်လေးမှာ ကြမ်းကြမ်းလိုးခံထားရသောကြောင့် တော်တော်လေးရဲနေသည်။ ခဏအကြာတွင် ကျော်ကြီးက မေသက်နွယ်အား ဖက်ထားလိုက်ပြီး အောက်မှပင်ကာ ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ လီးဝင်ထွက်ကောင်းစေရန် မြှေက်ကာ ကုန်းပေးထားလိုက်သည်။ ကျော်ကြီးက ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးပြီး မေသက်နွယ်ဖင်ထဲတွင် လရည်များကိုထုပ်ကာ ပြီးလိုက်တော့သည်။ ကျော်ကြီးနှင့် မေသက်နွယ်လဲ ခဏနားကာ အမောဖြေလိုက်သည်။ ပြီးမှ မေသက်နွယ်က ကျော်ပြီးအပေါ်မှ ထလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်စအိုထဲမှ လီးကြီးကျွတ်သွားချိန်တွင် မေသက်နွယ်စအိုလေးမှာ ခပ်ဟဟလေးကျန်နေခဲ့ပြီး လရည်ဖြူဖြူများ ထွက်ကျလာသည်။ ” ကိုကြီးတို့ ခဏနော် ” မေသက်နွယ်က ထိုလူနှစ်ယောက်ကို ခွင့်တောင်းပြီး ရဲရင့်ဦးရှိရာဖက်ကို လျောက်လာသည်။ ထိုလူနှစ်ယောက်မှလဲ သူတို့အရေးမဟုတ်သောကြောင့် ကြည်ဖြူစွာပင် ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်က ရဲရင့်ဦးလက်ကိုစွဲကာ အခန်းအပြင် လျောက်လမ်းသို့ထွက်လိုက်သည်။ ညမှာအတော်လေးနက်နေပြီမို့ အပြင်တွင် လူသွားလူလာမရှိချေ။ “မောင် အရမ်းတင်းနေပြီလားဟင်…. လာ…… နွယ်လုပ်ပေးမယ်” “မောင့်မိန်းမက အရမ်းထန်တာပဲကွာ မောင်လီးကြီးတော့ ပေါက်ကွဲတော့မှာပဲ ” “မောင့်မိန်းမက ဒီလိုခံရမှကြိုက်တာသိဘူးလား..” မေသက်နွယ်ကပြောပြီး ရဲရင့်ဦး အတွင်ခံကိုချွတ်ကာ လီးဒစ်ဖျားကို ငုံပြီးစုပ်ပေးလိုက်သည်။ ရဲရင့်ဦးမှာ မေသက်နွယ်ပါးစပ်ထဲ လီးရောက်သွားချိန်မှာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်သော ထူကဲတဲ့အရသာကို ခံစားလိုက်ရသည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ ရဲရင့်ဦးလီးကို စိတ်ပါလက်ပါနှင့်ပင် စုပ်ကာပေးလိုက်သည်။ ရဲရင့်ဦးမှာ မေသက်နွယ်၏ စုပ်ချက်များကို မခံနိုင်ပဲ ခဏလေးနှင့်ပြီးသွားသည်။
မေသက်နွယ်လဲ ရဲရင့်ဦးလရည်များကို ကုန်စင်အောင် သောက်ပေးလိုက်သည်။ “နွယ်ပြီးရင် မောင့်အလှည့် လာ…..” မေသက်နွယ်က ရဲရင့်ဦးအား အချက်ပြလိုက်ပြီး နံရံကိုလက်ထောက်မှာ စောက်ဖုတ်လေးနောက်သို့ ပြူးထွက်လာအောင် ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ရဲရင့်ဦးလဲ အချိန်ဆိုင်းမနေပဲ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်ကို နောက်မှကပ်ပြီး လျှာဖြင့်ယက်ျပးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ ကုလားလရည်နှင့် ကျော်ကြီးလရည်များ စီးကထားသောကြောင့် ချွဲကျိကာ လရည်နံများထွက်နေသည်။ ရဲရင့်ဦးလည်း မေသက်နွယ်စီမှာ ထိုသို့လရည်နံရတိုင်း မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးကို စုပ်ရအောင်စုပ်ယူလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ ကျော်ကြီးလိုးထား၍ ဟပြဲပြဲ ဖြစ်နေသော စအိုဝလေးကို လျှာနှင့်ပတ်လျှက်ကာပေးလိုက်သည်။ “အား……. အား…………. ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ်…….. ယက်ပေး…… ယက်ပေး…….” ထိုနေ့ညက မေသက်နွယ်အား ကျော်ကြီးနှင့် ကုလားဆိုသော လူနှစ်ယောက် ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လိုးသွားကြသည်။ မေသက်နွယ်မှာလဲ ရမက်ထန်ထန်နှင့် ခံလိုက်ပုံမှာ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်နှင့် ဖင်မှာ သွေးများထွက်ပြီး ကွဲသွားသည်ထိပင်ဖြစ်သည်။ ရဲရင့်ဦးလည်း ထိုလူနှစ်ယောက်ပြန်သွားမှာ အိပ့်ယာပေါ်တွင် မျောမျာ့လေးသာကျန်နေသာ မေသက်နွယ်အဖြစ်အားကြည့်ပြီး ကာမစိတ်များ တတ်လာခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆို မေသက်နွယ်မှာ ကျော်ကြီးနှင့်ကုလား လိုးထားသောကြောင့် မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ ပြန်ကညမစေ့နိုင်တော့ပဲ ထိုလူနှစ်ယောက်၏ လီရာတိုင်း ပြဲကွဲကာနေခဲ့သည်။ ပြဲနေသောစောက်ဖုတ်လေးအတွင်းမှ လရည်ဖြူဖြူများနှင့် သွေးစကလေးများရောနေသည်မှာ ရဲရင့်ဦးအတွက် ရမက်တိုးဖို့ မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ ရဲရင့်ဦးလည်း အချိန်ဆိုင်း မနေတော့ပဲ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးအား အပေါ်မှနေပြီး ထပ်ကာလိုက်တော့သည်။ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ ပြဲကွဲနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ရဲရင့်ဦးလီးမှာ အချောင်ကြီးချောင်ကာနေသည်။ ရဲရင့်ဦးတစ်ယောက် ထိုအဖြစ်ကြောင့် ကြက်သီးမွှေးညင်းများပင်ထလောက်အောင် ရင်ခုန်သံတွေမြန်လာပြီး ရမက်တွေတက်သွားသည်။ ရဲရင့်ဦးမှာ အချောင်ကြီး ချောင်နေသောမေသက်နွယ် စောက်ဖုတ်လေးအား လေးငါးဆယ်ချက်ခန့်ဆောင့်အပြီးတွင် မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်ထဲတွင် လရည်များပန်းကာ ထည့်လိုက်တော့သည်။ ထိုနောက်မှ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးအား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုခါမှ ကုတင်ဘေးက စာပွဲလေးပေါ်တွင်တွေ့သော တစ်သောင်းတန်ငါးရွက်ကိုမြင်ကာ ရဲရင့်ဦးပြုံးလိုက်မိသည်။ တကယ်တော့မေသက်နွယ်ဟာ ဖာသည်မတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။